Silauti Times | » समाचार समाचार – Silauti Times
इस्ट लन्डन । सामाजिक काममा उल्लेख्य याेगदान पुर्‍याएकाे भन्दै बेक्सली नेपाली समाज(बीएनसी)लाई बेक्सली बाेराे काउन्सिलले उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कारले सम्मानित गरेको छ । बेक्सले नेपाली समुदायलाई स्वैच्छिक र परोपकारी सेवाको लागि यो सिभिक रिकग्निसन अफ आउटस्ट्यान्डिङ अचिभमेन्ट अवार्ड २०२२ को साथमा सम्मानित गरिएको हाे । शनिबार १४ मेमा बेक्सली सिभिक अफिसमा बेक्सले बाेरोका मेयर जेम्स हन्टले…
काठमाडौं । संघीयता लागू भएपछिको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन आज बिहान ७ बजेबाट मुलुकभरमा ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडाका मतदान केन्द्रमा एकैपटक मतदान सुरु हुँदैछ । ७७ वटै जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ७५२ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदान...
लन्डन । आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ(फाेनिज) यूकेले पत्रकारितामा लागेकाहरूलाई प्राेत्साहन गर्न फाेनिज यूके पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गर्ने भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न त्रैमासिक बैठकले पुरस्कार स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हाे । भर्चुअल रूपमा जुममा सम्पन्न बैठकले साे पुरस्कार वार्षिक रूपमा...
एनआरएनए केन्द्रद्वारा एघार आइसीसी सदस्यहरु मनोनीत
काठमाण्डौं । गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विनोद कुँवर समुहले बिभिन्न देशहरुबाट आफ्ना आइसीसी सदस्यहरु मनोनित गरेको छ । अध्यक्ष कुँवरको अध्यक्षतामा गत ६ मे शुक्रबारका दिन बसेको भर्चुअल बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले एनआरएनएको पाँच महादेशीय क्षेत्रहरुमध्ये...
रहनेन् डा. चैतन्य सुब्बा
काठमाडौं । राष्ट्रिय याेजना आयाेगका पूर्व सदस्य डा. चैतन्य सुब्बा(मेन्याङ्वाे)काे निधन भएको छ । केही दिनअघि मुटुकाे शल्यक्रिया गरेका सुब्बाकाे मङ्गलबार ७५ वर्षको उमेरमा निधन भएको हाे । ताप्लेजुङकाे याङ्वरक थुममा पर्ने थेचम्बु पुर्ख्याैली घर भएका डा. सुब्बाकाे मुटुको शल्यक्रिया...
नेपाल प्रेस युनियनको अध्यक्ष र महासचिबमा को को छन् दाबेदार ?
काठमाडौं । लोकतन्त्रवादी पत्रकारहरुको संगठन नेपाल प्रेस युनियनको नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी शुरु भएको छ । अध्यक्ष र महासचिबमा दाबी गर्नेहरुको लर्को लागेको छ । यद्यपी, केही पत्रकारहरु भने मतबाट भन्दा पनि नेताहरुको आर्शिवादबाट चुनाव जित्ने दाबीका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएका...
अनुग्रह ज्वेलर्स यूर्केद्धारा खोटाङको शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग
काठमाण्डौं । अनुग्रह ज्वेलर्स यूकेका प्रवन्ध निर्देशक सुमन राईले जिल्ला खोटाङको एउटा विद्यालयमा विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्रीहरु प्रदान गरेका छन् । गत अप्रिल ११ का दिन खोटाङ जिल्ला महेश्वरी सानो डुम्रेको ऐंसुलुखर्कमा अवस्थित श्री मयुर आधारभूत विद्यालयका २०० जना विद्यार्थीहरु प्रत्येकलाई...
एनआरएनए इङल्याण्ड परिषदद्धारा लिभरपूल काउण्टी काउन्सिल गठन
लन्डन । गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेको इङल्याण्ड राज्य परिषदले इङल्याण्डको उत्तरपश्चिम क्षेत्र मर्सीसाइडमा आफ्नो काउण्टी काउन्सिल गठन गरेको छ । एनआरएनएलाई बिकेन्द्रीकृत गर्दै लैजाने प्रयासस्वरुप इङल्याण्ड राज्य परिषदले लिभरपूर काउण्टी काउन्सिल गठन गरेको हो । लिभरपूल काउण्टी काउन्सिलको कार्यसमितिमा...